Is kalsoonida Hoyga Haweenka
Xarunta latalinta Haweenka
Qaxootiga haweenka ee Regensburg waxay siisaa badbaado iyo hoy amaan ah Haweenka iyo Caruurtooda ay waxyeeladu ka soo gaartay rabshadaha.Anaga ahaan, Haweenka iyo Carruurtu waxay helaan talo-bixin iyo taageero qayb ahaan ah oo waxay ku horumarin karaan aragtiyo cusub noloshooda.
Ayaa u imaan kara magangalyada Haweenka?
Heeganka dumarka wuxuu siiyaa hoy badbaado leh dumarka ay waxyeeladu ka soo gaadhay rabshadaha iyo carruurtooda. Si loo helo badbaado iyo nabadgelyo, cinwaanka guriga haweenka waa qarsoodi.
Sidee ayey tahay jidka loo maro hoyga haweenka?
Shaqaalaha heeganka haweenka ayaa ku Saabsan Lambarka taleefanka 0941–24000 lahelkaro. Xafiiska magangalyada haweenka waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Khamiista laga bilaabo 8.00 illaa 17.00 iyo Jimcaha illaa. Waqtiyada ka baxsan waqtiga furitaanka,shaqaalaha ayaa soo wacaya. Lambarka Taleefanka moobaylka ee shaqaalaha ay ku qoran tahay waxaa laga heli karaa mashiinka jawaabta ee xafiiska.
Kulan shaqsiyeedka ugu horeeya ayaa ka dhici doona dhismaha Xarunta Talobixinta iyadoo balan lagu Qabanayo.
Sababtoo ah Hoyga Haweenka - sababtoo ah tirada yar ee meelaha, Xaaladda suuqa guryaha etc. – inta badan waa buuxsam, waa Caddaynta taleefan ee ku saabsan meel bannaan ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay. Macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan gelitaanka iyo nolosha hoyga haweenka waxaa looga wada hadli karaa Wadahadalka Taleefanka.
Haddii u cararidda hoyga haweenka la diyaarin karo, waa muhiim inaad soo qaadato waxyaabaha soo socda:
shahaadooyinka guurka / qirashada aabanimada iyo Baaqa haynta
Kaarka caymiska caafimaadka
Shahaadada tallaalka, buug yar
Caddaynta dakhliga (Tusaale ahaan warqadda mushaarka ama ogeysiinta xarunta shaqada; wargelinta lacagta carruurta, ogeysiinta lacagta waalidka)
Daawooyinka daruuriga ah
Alaabada shaqsiyeed sida sawirada ama waxyaabaha caruurtu ku ciyaarto
Xaaladda degdegga ah, hase yeeshe, qofka ay khusayso uma baahna inuu keeno wax uun, inay gasho Hoyga Haweenka. Alaabti shaqsiyeed iyo dukumentiyo ayaa laga heli karaa ka dib annaga oo gacan ka helna.
Waxa ugu muhiimsan waa, in haweenku naftooda iyo carruurtoodaba u soo qaadaan nabadgelyo!
Sidee bay haweenka iyo caruurtu ugu nool yihiin hoyga haweenka?
Haweenka ayaa kaligood nool ama carruurtooda hal qol ku nool. Jikada iyo musqusha way wadaagaan.
Dadka deggan xarunta badbaadada haweenka ayaa daryeela naftooda iyo carruurtooda, waxay nolol maalmeedkooda si madaxbanaan u abaabulaan oo go'aanadooda u gaara. Xeerarka guriga ayaa dejiya xeerar ku wada noolaanshaha guriga, kaas oo dhammaan dadka deggan ay tahay inay u hoggaansamaan. Sirta cinwaanka iyo sidoo kale ixtiraamka, tixgelinta iyo rabshadaha ayaa leh mudnaanta koowaad.
Immisa haween iyo carruur ah ayaa ku nool xeryaha haweenka?
Qaxoontiga madaxbannaan ee Regensburg wuxuu u fidiyaa meel 12 haween ah iyo carruurtooda. Qolalka waxay ku kala duwan yihiin cabirkooda, qaarkood waxay ku habboon yihiin haweeney aan ilmo lahayn, qaarna haweeneyda leh carruurta (caruur). Musqusha iyo jikada ayaa had iyo jeer ay wadaagaan laba ilaa afar qoys. Qolalka waa la qalabeeyey oo jikadahana si wanaagsan ayaa loo qalabeeyay. Mashiinada dharka lagu dhaqo ayaa sidoo kale la heli karaa.
Mudo intee leeg ayay Haweeneyda iyo carruurteedu ku jiri karaan hoyga haweenka?
Dhererka joogitaanka magangalyada haweenka waxay kuxirantahay xaalada haweeneyda iyo caruurteeda. Badbaadada iyo nabadgelyadu waa muhiim. Intaa waxaa sii dheer, aragtiyaha nolosha ka dib hoyga haweenka ayaa la shaqeeyaa. Hawshan, haweeney kasta waxaa taageera dumarka gabbaadka.
Heeganka dumarka ayaa waliba ah hoy carruureed:
Caruurta iyo Dhalinyarada waxay inta badan la kulmaan rabsho laftooda ama marqaati ahaan. Taasi waa sababta haweenka magangalyada ay u siiyaan iyaga badbaadin iyo nabadgelyo sidoo kale talo iyo taageero. Tani waxay u dhacdaa qaab shaqsiyadeed iyo / ama koox bixin ah.
Haweeney ma heli kartaa taageero ka dib markii ay sii joogtay hoyga haweenka?
Xitaa ka dib joogitaanka hoyga haweenka, haweenka iyo carruurta waxay talo iyo taageero ka heli karaan ururka “Haweenka caawinaya haweenka e.V.” Tani waxay markaa ka dhacaysaa xarunta la-talinta. Shakhsiga ayey ku xiran tahay inay iyagu naftooda go’aansadaan inay ka faa'iidaystaan ama aysan ka faa'iideysan doonin talooyinka soo socda.